Uhlanza Ukudla kuyadingeka kubo bonke. Kuyasiza silondoloze ukuma okuhle, normalizes ipheshana wokugaya ukudla, kanye (uma kunesidingo) kusiza ukuqeda isisindo okweqile.
Wezinsuku eziyisikhombisa ukuhlanzwa Ukudla
Izinsuku ezintathu zokuqala kumelwe nidle isaladi elenziwe iklabishi obomvu nomhlophe, u-beetroot (okuphekwe), izaqathe (fresh), u-anyanisi kanye kalamula. Isithokelo kungaba amafutha omnqumo. Usuku kufanele ukudla isigamu amakhilogramu lokhu isaladi. Lokhu kuzosiza ukuba bazogcwalisa umzimba, ahlinzeke izinga ezanele fibre.
Izinsuku ezintathu ezalandela - kuphela amaprotheni ukudla. Ukuze sasekuseni Kunconywa ukudla i-aphula amaqanda amabili ngesikhathi sekhefu - amagremu ezingamakhulu amabili izinhlanzi (Igumbi umusi), ukudla kwakusihlwa - inkomishi irayisi abilisiwe ngesipuni zamafutha omnqumo. Ntambama isidlo kufanele libe ingilazi yobisi, ukudla kwakusihlwa - amagremu ezingamakhulu amabili yogurt fat-free.
Usuku lokugcina ekudleni kuyadingeka ukuze kukhawulwe imenyu amalitha eyodwa nengxenye ka nonfat yogurt. Ngakho nsuku zonke kufanele baphuze okungenani 2 amalitha amanzi (noma itiye herbal).
French ukuhlanzwa Ukudla
Lokho kudla nakho ekuthuthukiseni, njengoba kuyintando unothile ngamavithamini, ngezinto eziphila kuzo izinto asebenzayo futhi ukulandelela izakhi. Namathela idinga okungenani izinsuku ezingu-2.
Esiswini esingenalutho ekuseni kunconywa ukudla isipuni esigcwele impova, wageza phansi ngamanzi. Impova komzimba ayifanele, ngakho lapho lesi sakhi ekudleni engashiywa. Ukuze sasekuseni kufanele uphuze inkomishi yetiye obuthakathaka nge crackers ambalwa, sidle ezimbili amathisipuni of uju, obuncane ibhotela, inkomishi yogurt noma ubisi (yesikimu). Ivunyelwe umphelelisi ukudla imifino ebilisiwe, tangerines ezimbili, amawolintshi noma ubhamubhamu nengxenye. Amanzi kungenziwa esiphuza nje ngaphambi kwasemini.
I kwasemini kufanele adle yikhulu amagremu (ingaba kancane ngaphezulu) mafutha yenkomo, inkukhu noma inyama yenkonyana, amahlanu amagremu ushizi ephansi fat, izithelo (ikiwi, umango, amawolintshi), ucezu lwesinkwa. Ngezinye kwasemini - inkomishi yetiye noma decoction yamakhambi.
Eyodla liyadingeka isaladi zemifino fresh ngamafutha yemifino kanye kalamula, nezinkezo ezinhlanu irayisi abilisiwe, amazambane amabili abilisiwe, amahlanu amagremu kaHamu, eziyikhulu amagremu zezinhlanzi (ungayithola enye Iqanda soft-abilisiwe). Futhi eyodla udinga ukudla kancane ephansi fat cottage shizi (50 grams) noma inkomishi yogurt, isipuni uju, ababili amathisipuni of kakolweni lwegciwane, baphuze ingilazi compote uphayinaphu, amagonandoda nama-apula.
Ngemva inkambo ukuhlanzwa umzimba kumele kube esebenzayo izithasiselo zokudla: impova, uju kanye kakolweni lwegciwane. Kunconywa ukuba udle kakhulu izithelo nemifino, ukukhokha ukunakekela okukhethekile iklabishi, watercress, izaqathe, ikiwi, ezisawolintshi, umango.
Usuku ezimbili ahlanza Ukudla
Ngosuku lokuqala: izithelo imenyu. Ukuze sasekuseni - izithelo isaladi (ubhamubhamu, Mandarin, olintshi, uphayinaphu, apula, amagilebhisi). Ungakwazi uphuze itiye herbal noma lamanzi esiphethu (bavunyelwe esikhundleni ezivamile, kodwa elicwengekileyo). Ngezinye kwasemini, kudingeka udle izithelo, baphuze amanzi amaminerali.
Isidlo sasemini lusekelwe futhi izithelo, lapho ungakwazi ukwengeza ikhabe, ikiwi. Qhubeka ukuze siphuza neziphuzo kakhudlwana. Eyodla ungakwazi ukudla banana, inkomishi chamomile.
Ngosuku lwesibili: imenyu zemifino. Ngesikhathi sokudla kwasekuseni - yemifino juice, ayoliswe ngosawoti kanye pepper. Bhaka ezine utamatisi, izikebhe kubo nosawoti ukunambitha. Ngaphezu juice, ungase futhi baphuze itiye herbal. Le ngxenye yesibili ukulungiselela kwasekuseni zemifino isaladi, enongiwe kalamula, usawoti kanye pepper. Ungakwazi uphuze amanzi amaminerali kuphela futhi zezinkambi engamakhambi.
Ngesikhathi sokudla kwasemini, ubilise kuze broccoli uhhafu kuphekwe, zucchini, cauliflower, isipinashi, inkathi ngosawoti kanye pepper. Kungaba nokufafazwa ingxube yemifino ingcosana weparmesan. Phuza zemifino ayo kanye lamanzi esiphethu. Emini udinga ukudla esibhebheni kavithamini C.
Lokho kudla ukuze ahlanze umzimba yakhelwe akukho izinsuku ezingaphezu kwezimbili, ngaphandle kwalokho umzimba ngeke uthole zonke izinto ezidingekayo kuye. Hlala uphilile!